Soo dejisan jv16 PowerTools 4.2.0.2009 – Vessoft
WindowsNidaamkaNadiifinta & Waxyeelayntajv16 PowerTools
Bogga rasmiga ah: jv16 PowerTools
jv16 PowerTools – qalab aad u weyn oo lagu hagaajinayo qaladaadka iyo si aad u wanaagsan ugu wanaagsan kombuyuutarka. Daaqada muhiimka ah ee softwareku waxay soo bandhigaysaa dhamaan noocyada qalabka ee la heli karo kuwaas oo loo qaybiyay qaybaha. Qalabyada mabaadi’da ah ee PowerTools waxaa ka mid ah nadiifinta kombuyuutarka, uninstall software, maaraynta bilawga, habaynta nidaamka, hubinta software nugul, antispy, iwm. Barnaamijka waxaa ku jira qeybta kormeerka, raadinta, maamulida iyo nadiifinta diiwaanka. jv16 PowerTools waxay leedahay habka maareynta ugu sareeysa, raadinta iyo soo kabashada faylasha. Sidoo kale, ka mid ah qalabyada jira ee software waxaa jira macnaheedu yahay in la maareeyo asturnaanta iyo waxaa jira tiro ah adeegyo dheeraad ah oo loogu talagalay qaabeynta. jv16 PowerTools waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto astaamaha qalabyada software shakhsi ahaaneed miiska ama Start menu si loogu sahlo si dhakhso ah.
Nadiifinta iyo saxitaanka qaladaadka nidaamka
Uninstall software buuxa
Soo dejisan jv16 PowerTools
Faallo ku saabsan jv16 PowerTools
jv16 PowerTools Xirfadaha la xiriira